काला मोराइग, कोस्टा ब्लान्कामा सबैभन्दा सुन्दर समुद्र तटहरू मध्ये एक यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | | España, समुद्र तटहरू
काला मोराइग एउटामा सबैभन्दा सुन्दर समुद्र तट हो कोस्टा ब्लान्का। यो Alicante क्षेत्रमा अवस्थित छ मारिना अल्टा र, अझ विशेष गरी, यसमा पोउल नौ डे बेनिटाकलJ halfvea र Moraira बीच आधा बाटो।
यस सेतो बालुवा र क्रिस्टल सफा पानीको सानो सानो कोव ईम्प्सिंग पछाडि देखा पर्छ पुइग डे ला लोलोरेना मासिफ, जो प्रभाव पार्ने तटमा पर्दछ चट्टानहरु एक सय मिटर उचाईको बीचमा त्यहाँ अवश्य, साना समुद्री तटहरू छन्। यदि तपाईं काला मोराइगको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई पढ्न जारी राख्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 काला मोराइगमा गर्नका लागि
1.1 कोभा dels आर्क्स
1.2 पैदल यात्रा
2 Cala Moraig कसरी पुग्ने
3 Cala Moraig को वरपर
काला मोराइगमा गर्नका लागि
तपाइँलाई काला मोराइगको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने पहिलो चीज भनेको यसको बायाँ कुनामा एउटा नग्नवादी परम्परा हो। तर, अझ महत्त्वपूर्ण चीजहरू तपाईले गर्न सक्नु हुन्छ यदि तपाईंले यो सुन्दर समुद्र तट भ्रमण गर्नुभयो भने।
क्षेत्र अभ्यास गर्नका लागि उत्तम छ डाइभिंग र स्नोरकलिंग। समुद्र तटमा झर्ने धेरै चट्टानहरूले पानीमा विभिन्न किसिमका प्रजातिहरू बस्ने पानीमा मनोरम चट्टान बनाउँछ।
कोभा dels आर्क्स
ती चट्टानी परिदृश्यहरूमध्ये, काला मोराइगको मुख्य आकर्षण बाहिर छ। यो कलको बारेमा हो कोभा dels आर्क्स, जसमा दुबै सतह र पानीको मुनि गुफाहरू छन्। यो कार्ट ड्रेनेज सिस्टमको उत्पादन हो जुन समुद्रले चट्टानमा लगाएको थियो र यसको एक राम्रो हिस्सा करिब billion अरब वर्ष पहिले डुबेको थियो।
यो जानिन्छ कि यो मान्छेहरु लाई पहिचान भएको थियो जब पहिलो बसोबास गर्ने क्षेत्रमा आएको थियो। पछि, यसले नाविकहरूको लागि शरणस्थलको रूपमा काम गर्‍यो, यद्यपि यस क्षेत्रको शहरीकरणसँग पोबल नो डे बेनिटाचेल जोड्ने सडकको कार्यहरू तयार गर्दा यसलाई फेरि पत्ता लगाइनेछ।
कोवा डेलस आर्कको बाहिरी भागले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ अद्भुत सूर्यास्त पोस्टकार्डहरू। र भित्र, गुफाको सब भन्दा राम्रो ज्ञात अंश भनिन्छ इमर्सिनिस्ट कोठा, "स्टार विन्डो" पनि भनिन्छ। त्यहाँबाट, तपाईं प्रशस्त तल्लो कोठाहरूमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ जुन खुला समुद्रसँग सिधा कुराकानी गर्दछ।
यद्यपि गुफामा प्रवेश गर्नु अघि तपाईंले केही सावधानी अपनाउनुपर्नेछ। सर्वप्रथम, तपाईंले यो गर्नुहुन्न जब ज्वार अग्लो हुन्छ र समुद्री पिट्छ किनभने यसले तपाईंलाई ढु hit्गामा हान्न सक्छ। र दोस्रो कुरा, गुहाको सतह फिसलन हुन्छ र खस्न गाह्रो छैन। तर, जे भए पनि यो एक हो प्रकृति आश्चर्य छ जुन सम्पूर्ण स्पेनमा समुद्रमा सबैभन्दा लामो भूमिगत आउटलेट पनि मानिन्छ।
अर्कोतर्फ, काला मोराइगबाट त्यहाँ धेरै पर्वतारोहण र साइकल मार्गहरू छन् जुन पुईग डे ला लोरेनेसको माथि उल्लिखित मासिफमार्फत पनि जान्छन्, कुम्ब्रे डेल सोल। तिनीहरू बीच बाहिर खडा एक जसले Caliros संग Abiar एकताबद्ध, जो दाखको खेतीको टेरेसहरू हुँदै बग्दछ र तपाईंलाई यस क्षेत्रको परम्परागत निर्माणहरू देखाउँदछ riurau, जहाँ अpes्गुरहरु राखिएको थियो। यो हामीले उल्लेख गरेको पहिलो सहरको मनोरञ्जन क्षेत्रमा समाप्त हुन्छ।
यस मार्गको साथ, जुन तपाईं पैदल र बाइक दुबैमा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंसँग छ Penya-Segats को, जसको मुख्य आकर्षण दृश्यमा पर्दछ यसले तपाईंलाई तटमा गुफाहरू प्रदान गर्दछ। र समान रूपमा, त्यो मोराइग गल्तीको हो, जुन एक उच्च भूवैज्ञानिक मूल्य छ। तर मार्ग तपाईले सब भन्दा छक्क पार्ने कल हो क्लिफ्स मार्ग, जसले SL-CV path० मार्ग अनुसरण गर्दछ, चिन्ह लगाइएको र असंख्य दृश्यहरू सहित।
Cala Moraig कसरी पुग्ने
Cala Moraig जानको लागि एक मात्र मार्ग सडक हो। तपाइँको लागि जानु पर्छ CV-। 737 र लैजानु हुने डिटोर लिनुहोस् Cumbre डेल सोल शहरीकरण। यो पार गरिसकेपछि, तपाईं पेटको माथिल्लो भागमा पार्कि lot भेट्टाउनुहुनेछ जहाँ तपाईंले आफ्नो गाडी पार्क गर्नुपर्नेछ र बाँकी बाटो पैदल यात्रा गर्नुपर्नेछ। यो धेरै लामो छैन, यद्यपि यो उच्चारण गरिएको छ।
Cala Moraig को वरपर
अर्कोतर्फ, काला मोराइगको समुद्र तटमा एक दिन पछि, तपाईं वरपरको जान्न पनि चाहानुहुन्छ। को मारिना अल्टा Alicante का केहि धेरै राम्रा शहरहरू छन् जुन तपाईंको भ्रमणको लागि योग्य छ। हामी तपाईंलाई यो भव नजिकको देखाउन जाँदैछौं।
यस शहरको बारेमा हामीले तपाईंलाई पहिलो कुरा भन्नुपर्दछ कि त्यो यसको नगरपालिका क्षेत्रमा तपाईसँग अन्य सुन्दर लोभहरू छन् जस्तै टेस्टोबाट y Llebeig द्वारा। तर यसले तपाईंलाई रोचक स्मारक पनि प्रदान गर्दछ। यी मध्ये, सान्ता मारिया मग्दालेनाको चर्च, १o औं शताब्दीमा बारोक शैलीमा बनाइएको। थप रूपमा, हामी तपाईंलाई अवलोकन गर्न सल्लाह दिन्छौं जैमे लोबेल वक्तृत्व, XIX मा निर्मित।
उही समय बाट छ टाउन हॉल र धेरै पुरानो पोर्टलेटजुन मध्ययुगीन पर्खालका ढोकाहरू मध्ये एक थियो र आज चर्च वर्गमा पहुँच दिन्छ।
काला मोराइगको एकदम नजीक पनि लगभग १,XNUMX०० बासिन्दाहरूको यो सानो शहर छ जसको सुन्दर पोर्ट छ। यसको स्मारकहरूको बारेमा, महल, जुन समुद्री डाकूको आक्रमणबाट क्षेत्रलाई जोगाउन समुद्री तट निगरानी गढी थियो।
यो सानो शहर Alicante प्रान्त को यस भाग मा सिफारिस गरिएको एक हो। तपाईंसँग यसका स्मारकहरूको संख्या देखेर छक्क पर्नुहुनेछ। ती मध्ये, को सेट मनोर घरहरू र दरबारहरू कि Alicante विश्वविद्यालय को सुविधा को मुख्यालय को रूप मा सेवा।
उनीहरूले यो पनि प्रकाश पार्छन् फ्रान्सिस्कन फादरहरूको कन्भेन्ट, १1645; बाट डेटि;; को टोरेस-ओर्डुआ प्यालेसआज संस्कृतिको घर; को शुद्ध कन्सेप्टको नियो-गोथिक चर्च र, सबै भन्दा माथि, टुक्रा, १ XNUMX औं शताब्दीमा मिति दिईएको र जुन शहरको सब भन्दा पुरानो भवन हो।
लोन्जा डि बेनिसा
यो क्षेत्रको सबै भन्दा महत्वपूर्ण शहर हो र द्वारा सुरक्षित गरिएको छ मोन्टगे मासिफ, वरपर तपाईसँग एक शानदार प्राकृतिक पार्क छ। पछिल्लोमा, तपाईं नजिक जान सक्नुहुन्छ केप सान एन्टोनियो, जसले यसको शानदार चट्टानहरूको साथ, तपाईंलाई कोस्टा ब्लान्काको अद्भुत दृश्यहरू प्रदान गर्दछ।
जाभाको स्मारकहरूको सम्बन्धमा, यो सबै भन्दा माथि खडा छ सान बार्टोलोमेको चर्च, १ 1931 औं शताब्दीमा निर्मित। यसले आफ्नो आयताकार योजना र यसको बलियो ढुंग्रोको कारणले किल्लाको विशेषताहरू एक मन्दिरको धार्मिक उदासीनता संग मिल्छ। थप रूपमा, यसको घण्टा टावर यस क्षेत्रका धेरै स्थानहरूबाट देखिन्छ। १ XNUMX .१ पछि यो एक राष्ट्रीय कलात्मक स्मारक भएको छ।
को Loreto हाम्रो महिला को चर्च, जुन पोर्टमा छ र जसको छतले जहाजको उल्टो नक्कल गर्दछ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं केप सान एन्टोनियोमा जानुहुन्छ, तपाईंले पाउनुहुनेछ एन्जिल्स को भर्जिन को मठ र धेरै टावर टाढा जसले समुद्री डाकुहरूको आगमनलाई नियन्त्रण गर्‍यो।
अन्तमा, काला मोराइग यो सम्पूर्ण कोस्टा ब्लान्कामा सबैभन्दा सुन्दर समुद्र तटहरू मध्ये एक हो। यो तपाइँ जस्तै चमत्कार प्रदान गर्दछ कोभा dels आर्क्स। तर क्षेत्रका शहरहरू पनि तपाईंको भ्रमणको लागि योग्य छन्। के तपाई यस कोनेलाई जान्न चाहानु हुन्न? Alicante प्रान्त?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » काला मोराइग
मोरक्को मा कसरी लुगा लगाउने